Njedebe ọnwụ, site na Cixin Liu, mmechi na-aga nke ọma | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
John Ortiz | | akụkọ sayensị emeghị eme, Akwụkwọ, Novela, ọtụtụ
Njedebe nke ọnwụ Cixin Liu.
Ọgwụgwụ ọnwụ, nke atọ nke epic Trilogy nke ahụ atọ nke onye edemede China bụ Cixin Liu dere na-ahapụ onye ọ bụla enweghị mmasị. Ndị Fans a na-akwado akụkọ saga a na gburugburu ụwa n'ihi akụkọ mbụ na nke ọhụụ nke Ncheta nke ụwa gara aga (2008) -ahịa dị ka Nsogbu ahụ — na Ọchịchịrị ọhịa (2017).
Ọgwụgwụ ọnwụ Ebu ụzọ bipụta ya n’asụsụ Chinese na Bekee n’oge 2017. gulọ na-ebipụta akwụkwọ nke Penguin Random House mere ihe mmalite ya na Spanish na 2018. Ihe omume nke nkwupụta okwu a na-ebo ebubo na mmetụta uche ma na-echegharị echiche miri emi na onye na-agụ ya. Ọ pụghị ịbụ ihe ọzọ, dịka Cixin Liu mepụtara ụdị ya n'ihi ezigbo ụzọ isi chebara echiche sayensị echiche na ọdịdị mmadụ.
2 Nchịkọta nke njedebe nke Ọnwụ
3.1 Obosara karịa nnyefe ndị bu ụzọ
3.2 Nkọwa nkọwa nkọwa dị oke egwu
3.3 Ngosipụta na "ọ bụghị naanị anyị" na nsonazụ nke nzute
A mụrụ Liú Cíxīn na Yangquan, China na June 23, 1963. Ndị mụrụ ya bụ ndị na-egwupụta ihe na mpaghara Shanxi. nakwa n'ihi ime ihe ike mere n'oge Mgbanwe Ọdịbendị, a manyere ha iziga obere Cíxīn n'ụlọ nne nne ya na Henan. Ọ nwetara akara ugo mmụta injinia ya na 1988 wee rụọ ọrụ na Shanxi Power Station ruo mgbe e mechara ya nsọ dịka onye edemede mgbe mgbasa nke ụwa niile Nsogbu ahu ato.
Na nchikota nke Ọgwụgwụ ọnwụ
Ọgwụgwụ ọnwụ na-amalite site na edemede nke Cheng Xin -otu n'ime ndị isi odide nke Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị— mgbe o tinyechara ọkara narị afọ na ezumike. Thatwa ọ na-enweta abụghị nke ncheta ya. N'oge ahụ ndị ọbịa (Trisolarians) eruteghị ụwa n'ihi na ejiri ihe dị egwu gbochie ha.
Ma oge udo na ọganihu a nwere ntọala dị egwu. Mgbe ahụ, Cheng na-ahụ maka ijigide ihe nchebe ụwa. ma chọpụta na onye iro ya agaghị ada mbà n'ụzọ dị mfe N'ikpeazụ, mgbe Onye na-ejide mma agha (nchebe nke mbara ala) ada, ụmụ ụwa kwesịrị ịkwadebe maka nlanarị na ọnọdụ ọgbaghara ndị na-abịa.
Obosara karịa nnyefe ndị bu ụzọ
En Ọgwụgwụ ọnwụ, Cíxīn Liú na-aga n'ihu ịzụlite akụkọ akụkọ ya dị mgbagwoju anya -oyi akwa site na oyi akwa- nke echiche dị iche iche ekpughere na Ncheta nke ụwa gara aga (Nsogbu ahu ato) na n'ime Ọchịchịrị ọhịa. Agbanyeghị, n'ime akwụkwọ mechiri ọgbụgba atọ ahụ, onye edemede dere nnukwu echiche, nkà ihe ọmụma na usoro mmụta karịa usoro bu ụzọ.
N'ezie, onye edemede dere amụma ya banyere oke teknụzụ, yana nsogbu omume ya. Na futuristic ụwa nke Ọgwụgwụ ọnwụ, a na-amanye ndị bi na Earth ibi n'etiti ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịnagide austerity. Anyị nọ na-emegiderịta onwe anyị (ihe na-emegiderịta onwe ya?) Ọnọdụ nke ịda ogbenye. N’ezie, nke a ma ọ bụrụ na e buru ihe ndị metụtara nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ nke kwesịrị ịkpata ọdịmma n'uche.
Nkọwa nkọwa nkọwa dị oke egwu
Na mgbakwunye, agha sara mbara a kọwara n'ụzọ sara mbara na-emenye onye na-agụ ya obi erughị ala. Onweghi nsogbu ochichi nke eweputara site na nkatọ onye edemede dere banyere ndi ochichi ndi ochichi na anyaukwu nke ndi di ike. N'otu aka ahụ, okwu mmekọrịta mmadụ na-ewere ọnọdụ n'etiti oke amaghị ihe, n'ihi na n'ikpeazụ akara aka nke ndị mmadụ bụ nchegbu kachasị mkpa.
Ngosipụta na "ọ bụghị naanị anyị" na nsonazụ nke nzute
Otu n’ime isi okwu kacha mma Cíxīn Liú kwuru n’isiokwu a bụ nghọta gbasara ịdị ndụ n’eluigwe na ụwa., yana ihe puru iche na ndi nwere ọgụgụ isi adi kari uwa. Ọnọdụ ọzọ nke kpughere ekpughe na-ezo aka na nsonaazụ nwere ike ịbịakwute na-ezute n'etiti mmepeanya abụọ. Ma, olee otu, ndị kachasị ike na-enwe mmeri mgbe niile ma na-etinye ọnọdụ ha n'atụleghị ndị a na-emegbu emegbu.
N'agbanyeghị akụkọ ifo nke atụmatụ ahụ, Cíxīn Liú depụtara ihe omume na ihe odide n'ime iwu anụ ahụ mara. Na mmechi, onye edemede dere ihe egwu na-akwụsị mgbe ọ na-ahapụ obi abụọ ya banyere ịdị adị nke ụwa niile. N'ikpeazụ, ọ na-ele anya na mbara igwe ebe ọ na-etinye onye na-agụ ya dịka onye so na obere akụkụ nke eluigwe na ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Ọgwụgwụ nke Ọnwụ, nke Cixin Liu dere